जीवनशैली Archives - Page 39 of 40 - Purbeli News
किन बिग्रन्छन् छोराछोरी ? सबै बाबाआमाले एकपठक पढनैपर्ने प्रा.गंगा पाठक
काठमाडौं । प्रायः सबै आमाबुवाको सपना हुन्छ छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियर बनाउने । विदेश पठाउने । समाजमा उदाहरणीय बनाउने र आफूले पनि उच्च दर्जा पाउने । तर, यस्तो सपना सबैको कहाँ पूरा हुनसक्छ र ? आमाबुवा सपनाको जालो बुन्दाबुन्दै छोराछोरीले बाटो बिराएको पत्तै पाउँदैनन् । कोही आफ्नो बेवास्ताका कारण केटाकेटीलाई मार्गदर्शन गर्न नसकेको बाध्यताको गुनासो गर...
सुत्नु अघि यसो गर्नुहोस, मुहारमा धेरै चमक आउछ …
सुन्दर देखिन जो कोही पनि चाहन्छन् । विशेषगरी महिलाहरुको हकमा यो कुरा बढी लागु भएको देखिन्छ । तर, समय परिवर्तनसँगै व्यस्त र प्रतिस्पर्धाको जीवनशैली, कामको तनाव, अस्वस्थयता, उदासिनताले अधिकांश मानिसहरु तनावग्रस्त रहन्छन् । त्यसमा पनि धेरै महिलााहरुको घर गृहस्थी र बाहिरको काम गरेर दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुनाले उनीहरु अझ तनावग्रस्त रहने गर्दछ...
सेभिङपछि छाला बिग्रन नदिन यसाे गर्नुहाेस्
एक खाेज अनुसार ३० प्रतिशतभन्दा बढी पुरुषमा सेभिङपछि छालामा समस्या देखिन्छ । कसैलाई खटिरा आउँछ त कतिलाई पोल्छ पनि । खासमा संवेदनशील छाला भएका पुरुषमा यस्ता समस्या देखिन्छ । यदि तपाईंमा पनि यस्तो समस्या छ भने सेभिङमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ : पहिला आफ्नो छाला कुन प्रकृतिको छ भनी पहिचान गर्नुपर्दछ । छालालाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ गरी वर्गीकरण ग...
काठमाडौँ । खानेकुरा खानेमात्र भनेर हुदैन । कुन चिज कहिले खाने के सँग खाने के सँग नखाने यस्ता कुराहरु पनि बुझ्नु जरुरी छ । अन्यथा हामिले खानाबाट अमृत पाउनुको साटो बिष पाइरहेका हुन्छौ । खानाको सोखिन मान्छेहरुलाई कुन खानेकुरासँग कुन खानेकुरा मिसाएर वा सँगै खानुहुँदैन भन्ने जानकारी हुँदैन । यसले गर्दा कहिलेकाँही कुनै दुई खानेकुरा सँगै खाँदा मानिस गम...
परिबर्तनशिल समय संगै आधुनिक समाजमा मागी विवाह भन्दा प्रेम बिबाह धेरै हुने गरेको पाइन्छ । तर यदि तपाईहरु मागी विवाह गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने केही महत्वपुर्ण प्रश्नहरु युवतीलाई सोध्नुहोस् । एक अर्काको आनीबानी थाहा पाउन वर्षौंसम्म लाग्न सक्छ । तर केही प्रश्न यस्ता छन् जुन प्रश्नबाट तपाई क्षण भर मै हुने वाला जीवन साथीको सम्पूर्ण आनीबानी थाहा पाउन सक्नु...
यी दिनहरुमा हुन्छ महिलालाई सबैभन्दा बढी यौनचाहना
एजेन्सी । गर्भधारणको चाहाना भएका तर बच्चा नभएर तनावमा परेकाहरुका लागि खुसीको खवर छ । हालै गरिएको एक अध्यनले महिलाको मुड अनुसार उनीहरुको प्रजनन क्षमता हुने देखाएको छ । डेली मेलमा प्रकाशित शोधका अनुसार महिलाको मुड र उनीहरुको प्रजनन क्षमताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । शोधकर्ताहरुले महिलाहरुको मुड अनुसार नै उनीहरु गर्भवती हुने कि नहुने भन्ने कुरा निर्ध...
‘भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थात् प्रणय दिवस नजिकिदै गर्दा गुलाबको फूलको माग पनि बढ्दो छ र यस दिनलाई प्रेम जोडीले ‘रोमान्टिक’ बनाउँन चाहन्छन् । आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्न रातो गुलाब वा अरु कुनै चीजको प्रयोग गर्छन् प्रेम जोडी । के तपाई पनि कोही विशेषलाई गुलाफको फुल दिन चाहनुहन्छ? चाहनुहुन्छ भने यस्तो नयाँ उपाय अपनाउनुहोस्, जसले तपाईप्रति माया र विश्वास बढ्ने छ...
मुड फ्रेश बनाउने यि हुन १० खानेकुरा
मानिसको मुड फ्रेश बनाउने र सधै खुशी राख्ने हार्मोनको नाम हो सेरेटोनिन हार्मोन । यो हार्मोनको सक्रियता बढाउनको लागि हामीले खाने कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्छ । यदि हामीले खुसी दिने खाने कुराहरु दिनहुँ प्रयोग गर्यौँ भने हामी जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि खुशी रहन्छौँ । खुशी हुनको लागि हामीले पोटाशियम, म्याग्नेशियम, र फलिक एसिडको मात्रा धेरै भएका खानेकुरा...
भनिन्छ रिसले आफैलाई खान्छ । हामीलाई यो कुराको थाहा नै हुँदैन की हाम्रो दैनिक जिवनका स– साना बानीहरु पनि मृत्युको कारण बन्न सक्छन् । अमेरिकी वैज्ञानिकहरुको अनुसन्धानले धेरै रिस उठ्ने मानिसहरुको मृत्यु छिटो हुने गरेको पुष्टि गरेको छ । आइवा स्टेट विश्वविद्यालय मा गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार नरिसाउने मानिसको तुलनामा धेरै रिस उठ्ने मानिसको अकाल मृत्यु...
अछाम/ ममता विकलाई छाउ हुने समय आयो कि कहाँ रात बिताउने भन्ने चिन्ताले सताउन थाल्छ । साबिकको शिद्धेश्वर गासि वडा नं ३ नौलाकोट गाउँमा छाउगोठ भत्काइएका छन्, त्यसैले पनि यस्तो बेला कहाँ बस्ने भन्ने ठेगान हुँदैन । कहिले घरको अथारामा, कहिले पाल हालेर आँगनमा सुत्नुपर्ने बाध्यता छ । सुरक्षित तरिकाले घरमै बस्ने भनेर छाउगोठ भत्काइए पनि छाउ भएका बेलाको बसा...